ZAWGYI/UNICODE ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မယ်ဟောင်ဆောင်ပြည်နယ် မယ်စရင်းဒေသက သံလွင်မြစ်အတွင်းသွားလာတဲ့ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ စက်ရေယာဉ်တစင်းကို မြန်မာစစ်တပ်က ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းအလံလွှင့်ထားတဲ့ စစ်လှေကို မြန်မာဘက်က ပစ်ခတ်တာဟာ စစ်ဆေးဖို့ တားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းဘက်ကတော့ ပြောပါတယ်။ မြန်မာဘက်အခြမ်း သံလွင်မြစ်ကမ်းမှာ သောတင်နေတဲ့ ကရင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေ သွားပေးတဲ့ စက်လှေတစီးကိုလည်း မြန်မာတပ်တွေဘက်က ဒီရက်ပိုင်း ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက် မအေးအေးမာက ပြောပြပါမယ်။
မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ် သံလွင်မြစ်ထဲသွားနေတဲ့ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ် ၃၃၇ ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးလာတဲ့ စက်လှေတစင်း ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့က ပစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတာကို အမှတ်၃၃၇ နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ Pol.Lt. Col. Niran Chaiyarat နိရမ် ချိုင်ယာရပ်က ဒီနေ့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဟောင်ဆောင်ပြည်နယ် Baan Tha Ta Fang ကျေးရွာအနီး မြန်မာဘက်ကတော့ မယ်ခါထာခေါ် မယ်သရစ်ကလို ဖက်မှာ ပစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်တွေ မြန်မာဘက်အခြမ်းကနေ လှမ်း ပစ်ခတ်မှုအတွင်း ထိခိုက် ဒဏ်ရာရမှု မရှိသလို ထိုင်းဘက်က ပြန်လည် ပစ်ခတ်တာမျိုးလည်း မရှိခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ထိုင်းအလံလွှင့်ထူထားတဲ့ စက်လှေကို ပစ်ခတ်တာဟာ ခြိမ်းခြောက် ပစ်ခတ်တာမဟုတ်ပဲ စစ်ဆေးဖို့ ရပ်တန့်ခိုင်းတဲ့အနေနဲ့ သတိပေးပစ်ခတ်တာလို့ အမှတ် ၃၃၇ ရဲ့ ထိုင်းရဲမှူးက ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ် ယူနီဖောင်းဝတ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ယောက်ပါလာတဲ့ စက်လှေကို မြန်မာတပ်တွေဘက်က တစ်နာရီခန့် စစ်ဆေးပြီးမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းသတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အခုဖြစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် နွစ္နိုင်ငံကြားက သံလွင်မြစ်ထဲမွာ အကျိုးတူ ခွဲဝေ သွားလာလုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့ ထိုင်းစက်လှေတွေကို နောက်ထပ်ပစ်ခတ်တာမျိုးတွေမလုပ်ဘို့နဲ့ TBC နှစ်နိုင်ငံနယ်ခြားကော်မတီ သဘောတူညီချက်တွေကို လိုက်နာဖို့အတွက် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်အာဏာပိုင်တွေ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေကြတယ်လို့ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့အမှတ်၃၃၇ က တာဝန်ရှိသူ ရှင်းလင်းသွားတာကို လည်း ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖေါ်ပြကြပါတယ်။
ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ် စက်လှေကို မြန်မာတပ်တွေက လှမ်းပစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကြောင့် သံလွင်မြစ်ထဲ သွားလာနေတဲ့ ထိုင်း စက်လှေ အစီး ၂၀ ကျော် သွားလာမှု ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ ထိုင်းဒေသခံ ကျေးရွာသားတွေကလည်း သူတို့တွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေထံမှာ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ခုလိုထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်ရဲ့ စက်လှေ အပစ်မခံရခင် ထိုင်းအရပ်သားလှေတွေကို မြန်မာဘက်က ပစ်ခတ်မှု ဧပြီလထဲမှာ ၂ ကြိမ်လောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပါတ်သက်လို့ ကရင္လူ့အခွင့်အရေးအုပ်စုရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စောနန္ဒဆူးကအခုလိုပြောပါတယ်။
"ဒါကတော့သူတို့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါက ပြည်သူတွေသုံးနေတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ် သူတို့က ထိုင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုင်းပြည်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တာက ပဋိပက္ခဖြစ်စေတဲ့ လုပ်ဆောင်မူဖြစ်တယ် သွားလာနေတဲ့လူထုကိုပစ်တာ ပြည်သူရဲ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကိုပိတ်ပင်တာလည်းဖြစ်တယ် သူတို့နဲ့ထိုင်းနဲ့ကဘယ်လိုပြသနာဖြစ်လဲတော့ ကျနော်တို့ ပြောမတတ်ဘူး ဒါပေမယ့်တည်ငြိမ်မူမရှိအောင်လုပ်ဆောင်တဲ့သဘောပဲ ဒီလိုသေနတ်နဲ့ခြောက်လှန့်ပစ်တော့ ပြည်သူလူထုက သွားလာမရဲဘူး ကြောက်လန့်နေကြရတာပေါ့"
ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နယ်စပ်ဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြတဲ့ ကရင်ရွာသားသောင်းနဲ့ချီ သံလွင်မြစ်ကမ်းနားက ဒေသတွေမှာ ခိုလှုံနေကြပါတယ်။ စားသောက် နေထိုင်ရေး ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပြေး ကရင်ဒုက္ခသည်တွေကို ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က ပရဟိတလုပ်သူတွေက ကူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကို သံလွင်မြစ်ကို ဖြတ်ပြီး သွားရောက်ပေးဝေခဲ့ပြီးနောက်မှာ အခုလို မြန်မာစစ်တပ်က ထိုင်းစက်လှေတွေကို လှမ်းပစ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုငျးမွနျမာနယျစပျ မယျဟောငျဆောငျပွညျနယျ မယျစရငျးဒသေက သံလှငျမွဈအတှငျးသှားလာတဲ့ ထိုငျးနယျခွားစောငျ့ရဲတပျဖှဲ့ရဲ့ စကျရယောဉျတစငျးကို မွနျမာစဈတပျက ပဈခတျခဲ့ပါတယျ။ ထိုငျးအလံလှငျ့ထားတဲ့ စဈလှကေို မွနျမာဘကျက ပဈခတျတာဟာ စဈဆေးဖို့ တားတဲ့သဘောဖွဈတယျလို့ ထိုငျးဘကျကတော့ ပွောပါတယျ။ မွနျမာဘကျအခွမျး သံလှငျမွဈကမျးမှာ သောတငျနတေဲ့ ကရငျဒုက်ခသညျတှအေတှကျ ထောကျပံ့ရေးပစ်စညျးတှေ သှားပေးတဲ့ စကျလှတေစီးကိုလညျး မွနျမာတပျတှဘေကျက ဒီရကျပိုငျး ပဈခတျခဲ့တဲ့ အခွအေနကေို ထိုငျးအခွစေိုကျသတငျးထောကျ မအေးအေးမာက ပွောပွပါမယျ။
မွနျမာနဲ့ ထိုငျးနိုငျငံ နယျစပျ သံလှငျမွဈထဲသှားနတေဲ့ ထိုငျးနယျခွားစောငျ့တပျ ၃၃၇ ကရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှစေီးလာတဲ့ စကျလှတေစငျး ဧပွီလ ၂၂ ရကျနကေ့ ပဈခတျခံရတယျဆိုတာကို အမှတျ၃၃၇ နယျခွားစောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့အကွီးအကဲ Pol.Lt. Col. Niran Chaiyarat နိရမျ ခြိုငျယာရပျက ဒီနေ့ အတညျပွုခဲ့ပါတယျ။ ထိုငျးနိုငျငံ မယျဟောငျဆောငျပွညျနယျ Baan Tha Ta Fang ကြေးရှာအနီး မွနျမာဘကျကတော့ မယျခါထာချေါ မယျသရဈကလို ဖကျမှာ ပဈခတျခံရတာဖွဈပါတယျ။
စဈကောငျစီတပျတှေ မွနျမာဘကျအခွမျးကနေ လှမျး ပဈခတျမှုအတှငျး ထိခိုကျ ဒဏျရာရမှု မရှိသလို ထိုငျးဘကျက ပွနျလညျ ပဈခတျတာမြိုးလညျး မရှိခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ ထိုငျးအလံလှငျ့ထူထားတဲ့ စကျလှကေို ပဈခတျတာဟာ ခွိမျးခွောကျ ပဈခတျတာမဟုတျပဲ စဈဆေးဖို့ ရပျတနျ့ခိုငျးတဲ့အနနေဲ့ သတိပေးပဈခတျတာလို့ အမှတျ ၃၃၇ ရဲ့ ထိုငျးရဲမှူးက ထုတျပွနျပွောဆိုပါတယျ။ ထိုငျးနယျခွားစောငျ့တပျ ယူနီဖောငျးဝတျနဲ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ ၄ ယောကျပါလာတဲ့ စကျလှကေို မွနျမာတပျတှဘေကျက တဈနာရီခနျ့ စဈဆေးပွီးမှ ပွနျလညျထှကျခှာခှငျ့ပွုခဲ့တယျလို့ ထိုငျးသတငျးတှမှော ဖျောပွထားပါတယျ။
အခုဖွဈရပျဖွဈခဲ့ပွီးနောကျ နှစ်နိုငျငံကွားက သံလှငျမွဈထဲမှာ အကြိုးတူ ခှဲဝေ သှားလာလုပျကိုငျစားသောကျနတေဲ့ ထိုငျးစကျလှတှေကေို နောကျထပျပဈခတျတာမြိုးတှမေလုပျဘို့နဲ့ TBC နှဈနိုငျငံနယျခွားကျောမတီ သဘောတူညီခကျြတှကေို လိုကျနာဖို့အတှကျ နှဈနိုငျငံ နယျစပျအာဏာပိုငျတှေ ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးနကွေတယျလို့ ထိုငျးနယျခွားစောငျ့ရဲတပျဖှဲ့အမှတျ၃၃၇ က တာဝနျရှိသူ ရှငျးလငျးသှားတာကို လညျး ထိုငျးသတငျးတှမှောဖျေါပွကွပါတယျ။
ထိုငျးနယျခွားစောငျ့တပျ စကျလှကေို မွနျမာတပျတှကေ လှမျးပဈတဲ့ ဖွဈရပျကွောငျ့ သံလှငျမွဈထဲ သှားလာနတေဲ့ ထိုငျး စကျလှေ အစီး ၂၀ ကြျော သှားလာမှု ယာယီရပျဆိုငျးခဲ့ရပါတယျ။ ထိုငျးဒသေခံ ကြေးရှာသားတှကေလညျး သူတို့တှကေို ကာကှယျပေးဖို့ထိုငျးအာဏာပိုငျတှထေံမှာ တောငျးဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ ခုလိုထိုငျးနယျခွားစောငျ့တပျရဲ့ စကျလှေ အပဈမခံရခငျ ထိုငျးအရပျသားလှတှေကေို မွနျမာဘကျက ပဈခတျမှု ဧပွီလထဲမှာ ၂ ကွိမျလောကျ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒါနဲ့ပါတျသကျလို့ ကရင်လူ့အခှငျ့အရေးအုပျစုရဲ့ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ စောနန်ဒဆူးကအခုလိုပွောပါတယျ
"ဒါကတော့သူတို့မလုပျသငျ့ဘူးပေါ့နျော ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒါက ပွညျသူတှသေုံးနတေဲ့လမျးကွောငျးဖွဈတယျ သူတို့က ထိုငျးကိုပဲဖွဈဖွဈ ထိုငျးပွညျသူကိုပဲဖွဈဖွဈလုပျတာက ပဋိပက်ခဖွဈစတေဲ့ လုပျဆောငျမူဖွဈတယျ သှားလာနတေဲ့လူထုကိုပဈတာ ပွညျသူရဲ လှတျလပျစှာသှားလာခှငျ့ကိုပိတျပငျတာလညျးဖွဈတယျ သူတို့နဲ့ထိုငျးနဲ့ကဘယျလိုပွသနာဖွဈလဲတော့ ကနြျောတို့ ပွောမတတျဘူး ဒါပမေယျ့တညျငွိမျမူမရှိအောငျလုပျဆောငျတဲ့သဘောပဲ ဒီလိုသနေတျနဲ့ခွောကျလှနျ့ပဈတော့ ပွညျသူလူထုက သှားလာမရဲဘူး ကွောကျလနျ့နကွေရတာပေါ့"
ကရငျပွညျနယျထဲမှာ ဖွဈနတေဲ့ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ နယျစပျဘကျထှကျပွေးတိမျးရှောငျကွတဲ့ ကရငျရှာသားသောငျးနဲ့ခြီ သံလှငျမွဈကမျးနားက ဒသေတှမှော ခိုလှုံနကွေပါတယျ။ စားသောကျ နထေိုငျရေး ဒုက်ခဖွဈနတေဲ့ စဈပွေး ကရငျဒုက်ခသညျတှကေို ထိုငျးနိုငျငံဘကျက ပရဟိတလုပျသူတှကေ ကူညီကယျဆယျရေးပစ်စညျးတှကေို သံလှငျမွဈကို ဖွတျပွီး သှားရောကျပေးဝခေဲ့ပွီးနောကျမှာ အခုလို မွနျမာစဈတပျက ထိုငျးစကျလှတှေကေို လှမျးပဈနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။